Xadgudubyada Internet-ka oo noqday kuwo baahsan, waxaa ku soo biiray jabsashada SIM kaarka… – Hagaag.com
Posted on 21 Maarso 2020 by Admin in Technology // 0 Comments
Robert Ross wuxuu fadhiyey xafiiska gurigiisa ee San Francisco bishii Oktoobar 2018 markii uu ogaaday in taleefankiisii ​​ka waayey shaqada uu qaban jiray, wuxuu waayey khadka telefoonkiisa oo go’naa, saacado yar kadib wuxuu khasaaray hal milyan oo dollar.
Ross wuxuu dhibbane u noqday in la jabsado SIM kaarkiia oo loo yaqaano ‘SIM hack’, waana weerar dhaca marka haakarku helo lambarka taleefanka dhibbanaha oo uu u wareejiyo taleefan kale kaarka dhibanaha sidaasina lagu hogaamiyo telefoonkiisa. Ross ayaa u sheegay CNN markii lala wareegay numbarka telefoonka mobilka ee gacanta, waxay ku dhacday haakerka ama jabsadaha ayaa u dhacay oo adeegsaday cinwaanka emailkiisa kadib ku guuleystay in faro saaro keydkiisa.
Ross wuxuu xasuustaa, “Waxaan fadhiyey xafiiska gurigeyga waxaanna ku arkay ogeysiis telefoonkeyga khaaska ah si aan u codsado inaan lacag ka baxsado mid ka mid ah hay’adaha dhaqaalahayga, waan la yaabay,” Tani waa wax la yaab leh, ma aanan weydiisanin inaan lacag kala baxo. ” wuxuu intaasi ku daray markii telefoonkeyga fiiriyey waxaan arkay anteeno maba heysto oo SIM kaar maba laha.
Xadgudubyada amniga Internetka ayaa sannadihii ugu dambeeyay noqday kuwa ku baahsan adduunka oo dhan, iyadoo laga yaabo inaanan qofna ka badbaadin in loo dhaco xogihiisa khaaska ah waqti uun. Liiska shirkadaha lagu xadgudbay oo laga xaday xogaha ayaa dheer sida hoteelada waaweyn ee caanka ah, shirkadaha deymaha, bangiyada iyo shabakadaha bulshada. In kasta oo Jabsahada SIM kaarka telefoonka uu yahay mid aan sidaasi u faafsaneyn, laakin wuxuu noqon karaa kan ugu daran burburinta xogaha.
U Dhicda SIM kaarka taleefanka gacantu ayaa lagu bartilmaameedsadaa dadka lacagaha digital-ka crypto ugu keydsan telefoonkooda. Sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen baarayaasha, Ross wuxuu heystay ku dhawaad ​​milyan dollar markii la weerarey.
Eedeysanaha kiiska Ross ayaa la qabtay, maadaama jabsadaha uu la xiriiray shirkada taleefonada gacanta ee Ross macaamilka ka ahaa, AT&T, wuxuuna ku guuleystey inuu shirkada ka dhaadhiciyo inuu Ross yahay oo doonayo SIM Kaar cusub oo loogu soo diro cinwaan uu siiyey.